၀ ယ်သူ၏ဈေးဝယ်ခရီးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း Martech Zone
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 25, 2015 သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 25, 2015 လော်ရာဆွမ်ဆင်
စားသုံးသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်စိတ်ကူးအသစ်မဟုတ်ပါ။ ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့လည်ပတ်သောအခါသင်ခံစားရသည့်ခံစားချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ စားပွဲထိုးကသင့်နာမည်နှင့်သင်၏အမှတ်တရကိုမှတ်မိသည် ပုံမှန်အတိုင်း။ ကောင်းတယ်ထင်တယ်
စိတ်ကြိုက်ပြုခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိတွေ့မှုကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သင်သူမ၏ဖောက်သည်ကိုသင်နားလည်ပြီးဂရုစိုက်ကြောင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ နည်းပညာသည်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများကို enable လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်စစ်မှန်သော personalization သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွင်ထင်ရှားသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုမိုလွယ်ကူပြုသောအမှုထက်ဟုပြောသည်။ လက်လီရောင်းချသူများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်၊ မည်သည့်အရာကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ရမည်နှင့်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းများရရှိရန်နှင့်ရုန်းကန်နေရသည်။ FitForCommerce တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များက“ ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း” ဟုမကြာခဏမေးလေ့ရှိသည်။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း“ one-size-fits-all” ဖြေရှင်းချက်မရှိပါ။
ကိုယ်ပိုင်စျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံများကို - ထောင်ပေါင်းများစွာသောရာနှင့်ချီသောအလားအလာများနှင့်လက်ရှိဖောက်သည်များထံမှ - ခေတ်မီသောဒေတာအစုများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နည်းပညာများကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကလွှမ်းမိုးသောခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များက A / B စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒေတာစုဆောင်းခြင်း (သို့) အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (သို့) လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်နည်းပညာအသစ်များကိုအသုံးချနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ခြုံငုံတဲ့နည်းဗျူဟာမရှိရင်ဒီနည်းဗျူဟာတွေဟာအကောင်းဆုံးနဲ့ဝေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိ ၁၀၀ ကျော်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးလက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးသူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၁၅ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအတွက်ကိုယ်တွေ့အသိပညာကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုရယူကြပါစို့။ Hyper-Connected World တွင် Omnichannel ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှကုန်ပစ္စည်းသို့ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းအထိလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုစျေးဝယ်ခြင်းခရီးတစ်လျှောက်တွင်ပေါင်းစည်းရန်အတွက်ဤအစီရင်ခံစာသည်ပေါင်းစည်းညီညွတ်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုပေးထားသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုကိုအနိုင်ရရန်ကြိုးစားခြင်းသည်တစ်ခါမျှပြင်းထန်သောတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးပါ။ မည်သည့်လမ်းကြောင်းကပင်ဖြစ်ပါစေ၊ သင့်ဖောက်သည်များသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများပဲ့တင်ထပ်လာလိမ့်မည်၊ အကြောင်းအရာသည်အသုံးဝင်လိမ့်မည်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များသည်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ သင်ဤအမှုကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါကသင်၏အောက်ခြေအဆင့်ကိုအပြုသဘောဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဖောက်သည်အများစုသည် ၄ ​​င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုသိရှိပါက၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဝမ်းမြောက်စွာမျှဝေပါလိမ့်မည်။
လုပ်ဖို့အများကြီး, ဒါအနည်းငယ်သာ ...
အချိန်? အရင်းအမြစ်များ? ကျွမ်းကျင်မှု? Buy-in? ထိုအရာများသည်လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားရာတွင်ဖော်ပြသောစိန်ခေါ်မှုများသာဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အဆင့်မှာစီမံခန့်ခွဲမှု buy-in ဖြစ်ပါတယ်။ တစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေတိုးမြှင့်နိုင်ပုံကိုအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှနားလည်သဘောပေါက်လာပါကသင်လိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ်များနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုရရှိရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရိုက်ချက်ကိုသင်ရရှိသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဦး စားပေးဖြစ်သင့်သည်
စိတ်ကြိုက်ပြုခြင်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ၎င်းတို့ကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမသိသော်လည်းစီးပွားရေး ဦး စားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောအမှုဆောင်အရာရှိများ၏ ၃၁% ကပြောကြားရာတွင်လူပုဂ္ဂိုလ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ဦး စားပေးအဆင့် ၃ ဆင့်အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူမ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူခြင်း။ အဘယ်အရာကိုသင်၏ site ကိုမှသူမ၏ဆွဲဆောင်? သင်၏ဖောက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသောအရာကိုသူနှင့်ထိတွေ့ရန်သင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
သငျသညျသူမ၏အာရုံကိုရှိသည်။ ယခုတွင်သင်သည်သူမကိုစေ့စပ်ထားခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုပိတ်ပစ်ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ကုန်သွယ်မှုနည်းစနစ်များနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
ပင်သူမ၏နောက်ထပ်မွေ့လျော်။ အော်ဒါမှာပြီးတာနဲ့သူနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုခိုင်မြဲစေရန်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မလဲ။
ရှောင်ကြဉ်ပါ creepy အချက်။ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လုံခြုံရေးသည်စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ သူမအချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းဆည်းပြီးကာကွယ်ပေးသလဲ။
အတူတူကအားလုံးကိုရရှိထားသူသောကော်။ မည်သည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားကိုသင်သိမ်းဆည်းသင့်သည်၊ မည်သို့စုဆောင်းမည်နည်း၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာသင့်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မြှင့်တင်မည်နည်း။
သင်သည်အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုမည်သို့ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုနားလည်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုသင်လေ့လာပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုရန်နည်းပညာများသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ဤနယ်ပယ်သည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုသံသယရှိစရာမလိုပါ။ ဖောက်သည်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သစ္စာစောင့်သိမှုအတွက်ပြိုင်ပွဲတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခြင်းသည်မကျင့်သုံးသောသူများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အပြင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုများကို အသုံးပြု၍ မွမ်းမံသောလက်လီရောင်း ၀ ယ်သူများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာမူတည်သည်။
FitForCommerce သည်မဟာဗျူဟာ၊ နည်းပညာ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ဘဏ္financialာရေး၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့်အခြားအရာများအတွက်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုထိရောက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ကူညီပေးသောဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံများသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတည်ဆောက်ရန်၊ ကြီးထွားရန်နှင့်အရှိန်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးအပေါ်မဟာဗျူဟာနှင့်လက်စွဲလမ်းညွှန်များပေးရန်သူတို့၏အတွေ့အကြုံကိုအားဖြည့်ပေးသောလက်လီအရောင်းဆိုင်သို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လေ့ကျင့်သူများဖြစ်သည်။
FitForCommerce မှာပြလိမ့်မယ် Shop.org ၏ Philadelphia တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တဲ #5အတွက်အောက်တိုဘာလ 7-1051 ရက်နေ့တွင်။
Tags: ဖောက်သည်ခရီးဖောက်သည်၏ privacyဖောက်သည်လုံခြုံရေးpersonalizationစိတ်ကြိုက်
Laura Swanson သည် FitForCommerce ၏အကြီးတန်းအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ရုပ်သံလိုင်းများကိုလက်လီအရောင်းဆိုင်တွင် ဦး ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စီမံခြင်းနှင့်ချထားပေးခြင်း၊ ၀ န်ထမ်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊